Xinhua Myanmar - မတော်တဆမှုကြောင့် သတိမေ့မြောနေသော ချစ်သူကို စွန့်ခွာမသွားဘဲ သစ္စာရှိစွာ စောင့်ရှောက်ပေးနေသူ
တရုတ်နိုင်ငံ အရှေ့ပိုင်း အန်ဟွေးပြည်နယ် ဟဲဖေးမြို့တွင် လျိုနင်က ၎င်း၏ချစ်သူ သတိမေ့ရောဂါဖြစ်နေသော ဖုန်ရာလိုအား ကိုယ်ခန္ဓာပြန်လည်သန်စွမ်းရေးလေ့ကျင့်ခန်း ပြုလုပ်ရာ၌ ကူညီပေးနေစဉ် (ဆင်ဟွာ) Social, Education & Health
ဟဲဖေး၊ ဇန်နဝါရီ ၂၆ ရက် (ဆင်ဟွာ) ဘာသာပြန် - ခေါန်ရိန်
တရုတ်နိုင်ငံ အရှေ့ပိုင်း အန်းဟွေးပြည်နယ် ဟဲဖေးမြို့တွင် ဖုန်ရာလိုဆိုသော အမျိုးသားသည် ၂၀၁၇ ခုနှစ်က မတော်တဆမှုတစ်ခုကြောင့် သုံးနှစ်ကျော်ကြာ သတိမေ့မြောနေခဲ့သည်။ ၎င်း၏ ချစ်သူမိန်းကလေး လျိုနင်သည် ဖုန်အား စွန့်ခွာမသွားဘဲ အနား၌နေထိုင်လျက် စောင့်ရှောက်ပေးခဲ့သည်။
နှစ်နှင့်ချီ၍ လှုပ်ရှားမှုမပြုလုပ်ခြင်းကြောင့် ကြွက်သားဆိုင်ရာ အားနည်းချည့်နဲ့မှုမဖြစ်စေရန် လျိုက ဖုန်အား လက်မောင်းမှ ခြေထောက်တိုင်အောင် ပုံမှန်နှိပ်နယ်ပေးသလို ပြန်လည်သန်စွမ်းရေး လေ့ကျင့်ခန်းများ ပြုလုပ်ရာတွင်လည်း ကူညီပေးလျက်ရှိသည်။ လျို၏ ဂရုတစိုက် စောင့်ရှောက်မှုများကြောင့် ဖုန်သည် တဖြည်းဖြည်းချင်း ပြန်လည်နာလန်ထူလာခဲ့ကာ အသိဉာဏ်လည်း ပြန်လည်ရရှိလာခဲ့ပေသည်။
တရုတ်နိုင်ငံ အရှေ့ပိုင်း အန်ဟွေးပြည်နယ် ဟဲဖေးမြို့တွင် လျိုနင်က ၎င်း၏ချစ်သူ သတိမေ့ရောဂါဖြစ်နေသော ဖုန်ရာလိုအား ကိုယ်ခန္ဓာပြန်လည်သန်စွမ်းရေးလေ့ကျင့်ခန်း ပြုလုပ်ရာ၌ ကူညီပေးနေစဉ် (ဆင်ဟွာ)
အံ့ဩဖွယ်ဖြစ်ရပ်များ ဖြစ်လာမည်ဟု ယုံကြည်ရင်း လျိုက ဖုန်အနေဖြင့် မကြာမီ ပြန်လည် နာလန်ထူလာမည်ဟု မျှော်လင့်ထားကြောင်းလည်း ဆိုသည်။ (Xinhua)
CHINA-ANHUI-HEFEI-COUPLE-COMATOSE BOYFRIEND (CN)
1-10(210126) -- HEFEI, Jan. 26, 2021 (Xinhua) -- Liu Ning helps her boyfriend Peng Yalou doing rehabilitation training in Hefei, east China's Anhui Province, Jan. 13, 2021.
Peng Yalou has been inacoma for more than three years after an accident in 2017. His girlfriend Liu Ning didn't leave him and chose to stay and take care of him. To prevent muscular atrophy due to years of inactivity, Liu regularly massages him from arms to feet and helps him with rehabilitation training. Under the careful nursing of her, Peng is gradually recovering and gaining consciousness. She believes miracles would happen, and hopes Peng would recovery soon, Liu said. (Xinhua/Liu Junxi)
11- (210126) -- HEFEI, Jan. 26, 2021 (Xinhua) -- Liu Ning feeds her boyfriend Peng Yalou in Hefei, east China's Anhui Province, Jan. 13, 2021.
12- (210126) -- HEFEI, Jan. 26, 2021 (Xinhua) -- Liu Ning shaves her boyfriend Peng Yalou in Hefei, east China's Anhui Province, Jan. 13, 2021.
Previous Article တရုတ်-ဥရောပ ရထားသည် လျောင်နင်ပြည်နယ်အတွက် ပြည်ပဆက်သွယ်ရေးတံခါးဖွင့် စွမ်းအင်သစ်ဖြစ်
Next Article မက္ကဆီကိုသမ္မတ နှင့် ပေါ်တူဂီကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရကြောင်း စစ်ဆေးတွေ့ရှိ